Dynamically Na-emepụta Keywords nke Mgbasa ozi | Martech Zone
Dynamically Na-emepụta Keywords nke Mgbasa Ozi
Sọnde, Septemba 23, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe ị na-agụ akwụkwọ Ebe John Chow, Echefuru m na m debanyere aha AuctionAds ma ọ dịghị mgbe m tinye koodu ahụ na saịtị m. N'abalị a, m gbakwunyere koodu na otu posts m n'etiti ọdịnaya post na ngalaba nkọwa. Ana m atụ anya ịhụ ka ha si eme.
AuctionAds nwere njirimara mara mma ebe ị nwere ike ịkọwapụta mkpụrụokwu ịchọrọ iji mepụta mgbasa ozi. Kama ịchọta ụfọdụ ndị nkịtị maka saịtị m niile, etinye m ya Ultimate Tag Warrior ngwa mgbakwunye iji (ozo)!
AuctionAds chọrọ ka ịhazi usoro isiokwu gị maka mgbasa ozi na ngalaba-akụkụ dị ka delimiter. Dịka nsonaazụ, ịkwesịrị ịhazi usoro mmepụta nke Ultimate Tag Warrior code. Emewo m nke m iji depụta mkpado mbụ ma tinyezie otu akụkụ na oghere n'etiti ndị ọzọ. Na mgbakwunye, Egosiri m ihe kachasị nke Keywords 3 kachasị ka egosipụta ma soro ya na usoro ndabara 3 nke m maara ga-egosipụta mgbasa ozi mgbe niile.
Icheta mgbasa ozi na ọdịnaya ga-eme ka mbuli elu na ọnụọgụ pịa-na mgbasa ozi. Emechara m nwalee Google Adsense vs. Google Referrals na otu n’ime ebe m lekwasịrị anya na Adsense nwere ihe dị ka ugboro 8 ọnụọgụ pịa-site. Ndabere na mgbasa ozi bụ ihe niile! Ọ bụrụ n’enyeghị mgbasa ozi dị mkpa, ị ga-akpasu ndị na-agụ gị iwe ma ọ bụ na ha ga-eto eto ileghara mgbasa ozi ahụ anya. Ọ dịghị onye chọrọ nke ahụ!
Otu ihe edeturu: Mgbe ị na-anwale koodu ahụ, ị ​​gaghị eweghachi nsonaazụ ọ bụla na mbụ. Ndị folks na Mgbasa ozi Mgbasa na-ekwu na ọ na-ewe oge iji wuo nsonaazụ isiokwu ndị ahụ. Amaghị m oge ọ ga-ewe. Ka nwere ike nweta Ntuziaka revenue anya nke Auction Mgbasa ozi esighi na interface, ezie!
Tags: okushon mgbasa ozi